Football Khabar » रोनाल्डो र मेस्सीलाई लिएर सामाजिक सन्जालमा बार्सिलोना–युभेन्टसबीच जुहारी !
रोनाल्डो र मेस्सीलाई लिएर सामाजिक सन्जालमा बार्सिलोना–युभेन्टसबीच जुहारी !
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाले आफ्नो अफिसियल ट्वीटर ह्यान्डलबाट ‘विवादस्पद’ ट्वीट गरेपछि इटालियन क्लब युभेन्टससँग सामाजिक सन्जालमा जुहारी चलेको छ । महान् खेलाडी को भन्ने विषयमा बार्सिलोनाले आफ्ना खेलाडी लिओनल मेस्सीको नामलाई लिएर युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई इंगित गर्दै व्यंग्यात्मक ट्वीट गरेको थियो ।
दुई दिनअघि युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा बार्सिलोना युभेन्टसको घरेलु मैदानमा उत्रिएको थियो । आफ्ना प्रमुख खेलाडी लिओनल मेस्सीलाई लिएर इटाली पुगेको बार्सिलोनाले युभेन्टसलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–२ ले हरायो । सो खेलमा बार्सिलोनाका लागि उसामान डेम्बेले र लिओनल मेस्सीले १–१ गोल गरेका थिए ।
बहुप्रतीक्षित सो खेलमा युभेन्टसका रोनाल्डो भने कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका कारण खेल्न पाएनन् । युभेन्टसले रोनाल्डोलाई बार्सिलोनाविरुद्ध खेलाउन अन्तिम समयसम्म पर्खे पनि रोनाल्डोको पिसिआर जाँचको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि बार्सिलोनाले रोनाल्डो नभएको मौकामा युभेन्टसलाई हराएर ३ अंक जोड्यो ।
रोनाल्डो नखेलेको खेलमा उनको टिमलाई बार्सिलोनाले हराएपछि बार्सिलोनाका कर्मचारीले क्लबको अफिसियल ट्वीटर ह्यान्डलबाट एक ट्वीट गर्दै युभेन्टसका खेलाडी, कर्मचारी र समर्थकले महान् खेलाडीलाई आफ्नै मैदानमा देखेकोमा बार्सिलोना खुसी भएको भन्दै मजाकपूर्ण ट्वीट गरेका थिए । बार्सिलोनाले ट्वीटरमा भनेको छ– ‘हामी खुसी छौं कि, तिमीहरूले आफ्नै मैदानमा ‘गोट’ (ग्रेटेस्ट अफ् अल टाइम’ लाई देख्न पायौ ।’
बार्सिलोनाले रोनाल्डोप्रति घोचपेच गर्दै र आफ्ना खेलाडी मेस्सीको तारिफ गर्दै ट्वीट गरेपछि युभेन्टस पनि के कम ! उसले पनि बार्सिलोनालाई मुखभरिको गतिलो जवाफ फर्कायो । उसले बार्सिलोनाको ट्वीटमा जवाफ दिँदै भनेको छ– ‘सम्भवतः तिमीहरूले गलत शब्दकोष हेरेको हुनुपर्छ, हामी तिमीहरूका लागि क्याम्प नोउमा वास्तविक गोट लिएर आउँछौं ।’
आजसम्म सिनियर टोलीबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न नसकेका तर ६ पटक बालोन डि‘ओर जितेका मेस्सी र ५ पटक बालोन डि‘ओर तथा दुई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेका रोनाल्डोमा को चाहिँ महान् खेलाडी (‘गोट’ अर्थात् ग्रेटेस्ट अफ् अल टाइम) रहेको भन्नेमा विवाद र तुलना हुँदै आएको छ । रोनाल्डो र मेस्सी दुवैका समर्थकले आ–आफ्ना खेलाडीलाई सर्वकालीन् महान् खेलाडीका दाबी गर्छन् ।
बार्सिलोनाको ‘हर्कत’को सर्वत्र आलोचना
यता, बार्सिलोनाले अफिसियल सामाजिक ह्यान्डलमार्फत् आफ्ना खेलाडीको तारिफ गर्ने बहानामा अर्को विपक्षी टिमको खेलाडीको मजाक उडाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ । फुटबल समर्थकदेखि कतिपय फुटबल ठूला नामका व्यक्तिले पनि बार्सिलोनाको यस्तो व्यवहारलाई ‘अनुशासनहीन’ भनेका छन् । बार्सिलोनाले मेस्सीको तारिफ गर्ने नाममा युभेन्टसका रोनाल्डोले बार्सिलोनासँग खेल्न नपाएको विषयलाई लिएर मजाक उडाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।
बार्सिलोनाको ट्वीटबाट पनि यो अर्थ लगाउने प्रशस्तै ठाउँ छ । नत्र, एक क्लबले ‘हाम्रा (कोही एक) खेलाडीलाई तिमीहरूले आफ्नै मैदानमा देख्न पायौ, तिमीहरू अब धन्य भयौ’ भन्ने आशयको भनाइ अफिसियल रूपमा राख्नु जरुरी थिएन कि !
बार्सिलोनाका आफ्नै थुप्रै समर्थकले विश्वकै एक ठूलो क्लबले विवाद सिर्जना गर्ने ट्टीट गरेर केटाकेटीपना देखाएको भन्दै ट्वीट हटाउन सोही ट्वीटमा माग गरेका छन् । खेलपछि पत्रकारले बार्सिलोनाका प्रशिक्षकलाई सो ट्वीटबारे सोध्दा रोनाल्ड कोम्यानले त्यसो भएको भए त्यो अपरिपक्वता रहेको बताएका थिए । ‘मैले त्यो देखेको छैन । यदि त्यसो भएको भए यो अपरिपक्वता हो भन्ने म ठान्छु । संस्थागत रूपमा अन्य खेलाडीलाई चोट पर्ने वा असर पर्ने गरी धारणा आउनु राम्रो होइन,’ कोम्यानले भने ।
बार्सिलोनाको सो ट्वीटलाई लिएर धेरैले आलोचना गरे पनि अझैसम्म सो ट्वीट हटाइएको छैन । बार्सिलोनो गरेको सो ट्वीटलाई जति धेरैले रि–ट्वीट र कमेन्ट गरेका छन्, युभेन्टसले दिएको जवाफ पनि उत्तिक रि–ट्वीट भएको छ ।
यस्तो छ बार्सिलोनाले गरेको ट्वीट :
प्रकाशित मिति १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार २१:३७